Usafisa ukudlubha eleBafana uBenni | IOL Isolezwe
Usafisa ukudlubha eleBafana uBenni
Isolezwe / 26 July 2012, 10:42am / MBONGISENI BUTHELEZI
UMGADLI we-Orlando Pirates uBenni McCarthy uthi usakuthanda ngenhliziyo yakhe yonke ukudlalela iBafana Bafana. Isithombe: GALLO IMAGES
UPHUMELE obala okokuqala selokhu achithwa eqenjini lesizwe ngokuthi usafuna ukudlalela iBafana Bafana umgadli we-Orlando Pirates uBenni McCarthy.
Ekhuluma ngesikhathi iqembu lakhe linesithangami nabezindaba, ngaphambi komdlalo omkhulu weCarling Black Label Cup abazowudlala neKaizer Chiefs ngoMgqibelo, uMcCarthy uthe usengathanda, uma enikwa ithuba, ukugqoka imibala yeqembu lesizwe lakuleli.
“Ngingathanda ukuthi ngiphinde ngidlalele iBafana Bafana ngoba manje sekunomqeqeshi okubeke kwacaca ukuthi uzokhetha abadlali ngokuthi bazimisele kangakanani hhayi ngoba ebathanda,” kusho uMcCarthy izolo.
Ukhuluma kanjena nje lo mgadli umqeqeshi omusha weBafana uGordon Igesund useke wacashunwa ethi uma uBenni ewahlohla amagoli nakanjani uzombiza eqenjini lesizwe.
“Abadlali bazothola ithuba elikahle lokuzibonakalisa futhi yinto enhle ukuthi bazokhethwa ngokwenza kahle kwabo. Ngike ngahlangana naye (u-Igesund) wangikhuthaza wathi angiqhubeke ngidlale kahle.”
UMcCarthy uzwakalise ukuthi akwehli kahle kuyena ukubona iBafana ishaya udaka noma ibhekene namazwe obekwaziwa ukuthi iwashaya kalula phambilini.
“Uma ubheka ibhola lethu lapha ekhaya liphezulu kodwa eqenjini lethu lesizwe kusinda kwehlela. Ngingathanda ukuthi ngibe nesandla ekutheni ngisuse iqembu lethu kulesi simo elikuso njengamanje,” kuqhuba lo mgadli.
Uthe iminyaka yakhe (engu-34) ayisho lutho ngoba usakwazi ukushaya amagoli.
“Ngizizwa sengathi ngineminyaka engu-25. Ngiwuzwa ulula umzimba wami kunakuqala kanti asisekho lesiya sisu abebekhuluma ngaso abantu. Uma ngingeke ngiphaza-nyiswe wukulimala ngizowuthola umklomelo womshayimagoli ophambili kule sizini ezoqala,” kusho uMcCarthy.
Lo mgadli wachithwa kuBafana nguPitso “Jingles” Mosimane ngaphambi kweNdebe yoMhlaba ka-2010, ngenxa yokukhuluphala. Nokho abantu abaningi babona yena noSiyabonga “Bhele” Nomvete bengayixazulula inkinga yamagoli eqenjini lesizwe. Uke wasolwa ngokuhlohla uMoeneeb Josephs ukuthi akayeke ukudlalela iBafana ngoba ijezi lihlale linikwa u-Itumeleng Khune.
Kungenzeka noJosephs ashaye ibuya uma umngani wakhe uBenni egcina ebiziwe kuBafana.
UMcCarthy uthe okwakhe wukushaya into ecokeme kuBucs ukuze u-Igesund angamkhohlwa embusweni wakhe.
“Njengamanje ngibheke ukwenza kahle kuPirates. Ngizokwenza engidume ngakho okungukushaya amagoli. OkweBafana kuyozenzakalela.”
Mayelana nomdlalo wabo neChiefs uthe bazokwenza into yamehlo uma sebebhekene nezimbangi zabo ngoMgqibelo ngo-7.30 ebusuku.
“Sizophuma nesikhali esiyingozi sibalimaze ngoba bayizimbangi zethu ezinkulu. Umdlalo wethu nabo uhlale ufana nowamanqamu. Awukaze waba ngowesihle. Sifuna ukuwunqoba noma kanjani,” kusho uMcCarthy.
Uphinde wabonga abalandeli ngokumvotela ukuthi abe sesikimini seBucs. “Ngiswele amazwi okubonga abalandeli abangivotele. Kusho lukhulu kimina njengomdlali abakwenzile.”
Khonamanjalo, iPirates isayinise umgadli wase-Zimbabwe uTakesure Chinyama.